Indlela Balungise flash-USB ukushayela ngokwakho?
Kuleli zwe lanamuhla, ukuze uthumele ulwazi abantu esetshenziswa ukusebenzisa la ma-stick. Kuze kwaba seminyakeni embalwa edlule kwakukhona amasondo, kanti ngaphambi kwalokho nhlobo idrayivu. Uma eqhathaniswa lezi amadivaysi kakade akusebenzi flash drive ayitheli nokuncane kakhulu ivolumu. Yiqiniso, nge ithandwa kangaka, baqala ukuthuthukisa ngokushesha, futhi manje ungathola isilondolozi kusuka 1 GB kuya ku 516 GB.
Ngeshwa,, njenganoma iyiphi enye ubuchwepheshe, ungakwazi ukugqashula. Lokhu kwenzeka ngenxa yezizathu ezihlukahlukene: ithole flash drive ngenkathi uqopha, noma yephukela kusukela imithwalo esindayo, njll Abasebenzisi usuqalile ukubheka ongakhetha, indlela yokulungisa induku ... Uma inkinga ne-hardware, kungashiwo nje baxoshwa. Elinye icala - lokhu ukwehluleka isofthiwe. Kulokhu, ungakwazi azame ukuthola wangaphandle hard drive. Musa nje uthwale yakho ye-USB drive esikhungweni sesevisi, njengoba induku ukubuyela ukuphila okulula, into esemqoka - balandele imithetho. Ake sibheke indlela yokulungisa ye-USB flash ukushayela ngokwakho.
Flash drive akawuvuli
Mhlawumbe kokuxhuma USB flash drive, nekhompyutha elibona, kodwa uma uzama ukuvula okuqukethwe amaphutha zenzeka. Uma ubonisa ikhompyutha "Akungeni", bese okungenzeka kakhulu udinga ukuhlanza wangaphandle hard drive kusuka amagciwane.
Yini inkinga? Ngemva induku lwangena amafayela ezinonya, baye wadala ifayela autorun.inf. He is isizathu okungadingi ukusebenzisa i drive zangaphandle.
Indlela Balungise ye-USB flash drive? Kulokhu, hlola idrayivu bangaphandle Antivirus. Ngemuva kokuthi ususe amafayela ezinonya, kudingeka ngesandla susa autorun.inf ifayela. Iya "Computer yami" futhi chofoza ngakwesokudla flash drive. Bese ukhetha into "Vula". Esikhathini ewindini elisha kuvula flash drive, singakwazi ukususa ifayela ezinonya kuphela.
-USB drive awufomethiwe
Isizathu ukuthi akawuvuli flash drive, kungaba ukwehluleka inkumbulo. Indlela Balungise ye-USB flash drive? Kulokhu kwanele ukufometha isitoreji sangaphandle. Ngeshwa, konke okuqukethwe ayosuswa.
Iya "Computer yami" futhi kwesokudla uchofoze idrayivu bangaphandle. Okulandelayo udinga ukukhetha "Ifomethi". Ngeshwa, le ndlela akusho ngaso sonke isikhathi ngisize. Uma akakwazanga ukubuyisela wangaphandle hard drive, udinga ukuzama indlela yesibili.
Ngakho sidinga ukuya lwemibhalo "Disk Manager." Ukuze wenze lokhu, cindezela inhlanganiselazihlonzi Win R. Esikhathini ewindini elisha, thayipha umyalo diskmgmt.msc okulandelayo bese uchofoze "KULUNGILE". I "Umphathi Disk", lapho kudingeka ukhethe USB flash drive bese uchofoza "Ifomethi".
Flash khadi ayitholiwe kukhompyutha yakho
Ukuze siqiniseke ukuthi inkinga nge idrayivu bangaphandle, udinga ukuthola futhi bazame unamathisele nezinye-USB nezixhumi, okuyinto zitholakala kwi umbadlana. Uma inkinga iqhubeka, hlola ye-USB drive kwenye ikhompyutha.
Indlela Balungise ye-USB flash drive micro-SD? Okokuqala udinga kuhlole kwezinye USB izixhumi. Uma inkinga iqhubeka, kungenzeka ukuthi iphutha itholakala cardreader. Zama ukuyiguqula.
Uma idrayivu bangaphandle kuchazwa ngakolunye computer, bese kudingeka uzame ukususa umshayeli. Indlela ukukwenza? Iya "Control Panel", khetha lwemibhalo lapho "Isiphathi sedivayisi". Esikhathini ewindini elisha, ngifuna emgqeni "yesitoreji se-USB» futhi ususe umshayeli.
Ngemva izinyathelo ezingenhla ukuvimbela flash drive bese uqala kabusha ikhompyutha yakho. Ngemva kwalokhu ukuxhuma-USB drive bese ufake abashayeli ezintsha.
Uma reinstallation akuzange Imiphumela, kufanele usule legatsha ebhukwini. Bafaka lonke ulwazi kudivayisi yakho. Okokuqala, kudingeka ukuqoqa lolu lwazi, ikakhulukazi, ukuba afunde imingcele embalwa (PID futhi VID). Ukuze ubone lesi idatha, kuzomele ubuyele emuva ikhathalogi "Isiphathi sedivayisi" futhi ngokuchofoza kwesokudla flash drive. Iya entweni "Ulwazi" lapho ikhodi kudivayisi ukuboniswa.
Emuva kwalokho cindezela inhlanganiselazihlonzi Win R, ewindini elisha, faka regedit umyalo. Ngakho sivula ebhukwini umhleli, lapho kumelwe uthole imingcele ezimbili, izwi lokuqala iphela USB, kanye USBSTOR yesibili. Vula lezi amafolda bese ubheka okwehlukile, bese uwasuse. Iqalise ikhompyutha yakho bese uhlole ukusebenza idrayivu bangaphandle.
idrayivu sangaphandle neyaziwayo kodwa hhayi osayizi okukhipha
Uma uzithola le nkinga, kuye kwaba ukwehluleka kwimemori. Indlela Balungise ye-USB flash drive? Kulokhu, udinga ukulanda uhlelo ChipGenius. Ngakho singafunda VID futhi PID of drive yakho yangaphandle. Uma usuwatholile model of the chip induku, udinga ukuya flashboot.ru indawo, lapho kufanele ufake idatha. Qala yokusesha. Ngakho, sithole? Kuyinto abashayeli ezifanele kanye Tinsita I-disk yakho esikhiphekayo. Ngemva kokufaka i-flash idrayivu yakho kufanele asebenze.
Indlela Balungise induku USB, uma wonke umuntu ehluleka
Yiqiniso, ne drive zangaphandle kungase kube izinkinga ezahlukene ukuthi ungavumeli ukuba ubuyisele flash drive kwi ukungasebenzi kakade kuchazwe. Kukhona enye indlela esingathola ukubuyela kudiski esikhiphekayo ekuphileni. Nokho, le ndlela kuyinto ekufanele flash ngemoto, khadi abayi abuyiselwe. Uma bahlushwe umbuzo indlela yokulungisa ye-USB flash ukushayela ungowesilisa, zama le ndlela.
Kuphi ukuqala? Thatha yakho ye-USB drive bese ukhipha ikhava plastic. Sidinga ukuguqula idivayisi yakho ibe kwimodi yokuhlola. Jikela induku njengoba kukhonjisiwe esithombeni. Ekhoneni kuyinto inkinobho encane ukuthi udinga ukuba seduze. Njengomthetho, kuzomele ukhiye izikhonkwane 29 futhi 30. Indlela ukukwenza? Thatha inaliti push endaweni efanele.
Faka idrayivu esikhiphekayo ku-USB port kwikhompyutha ezikhonjwe induku futhi kwaba iyatholakala. Kuphela ngemva kwalokhu oxhumana ikhefu. Nokho, asikho isidingo ukunqamula i-ke kusukela kukhompyutha, njengoba namanje ngeke zisebenze. Okulandelayo, udinga ukufaka abashayeli kanye Tinsita, indlela yokukwenza, sixoxisane kakade.
Ngemva izenzo ezenziwe yakho ye-USB kudivayisi kufanele asebenze. Uma kungaqali ke mhlawumbe kukhona nezinkinga ihadiwe. Kulokhu, kuba lula ukuphonsa kuka ukubuyisela. Njengoba kungenzeka uye waphawula, ukulungisa USB flash drive kulula, uma inkinga itholakala isofthiwe ingxenye. Nokho, ukuze masinya ukubuyisela idivayisi yakho, kufanele sibone inkinga ngokushesha.
Inkumbulo Virtual computer nokuthi ukwandisa
Ikhompyutha sivuleka ngokwayo: indlela yokuxazulula izinkinga ezihlobene ne iinthombe
AMD Phenom II X4 920: Ukucaciswa, ukubuyekezwa kanye nobufakazi
Ingane Ikhompyutha: isiqu, incazelo amathoyizi
Palma de Mallorca. Palma de Mallorca izithombe. Palma de Mallorca: Airport
Izinto zokuvala umoya "Ecover": ngobuhle nangobubi bawo
Yini ehlukanisa eziyisikhombisa Ukudla isigcebe sembali?
Wazi kanjani ukuthi i-intercom ikhodi?
Uyini-operating system MeeGo nendlela ukulanda?
Amabhayisikobho mayelana nama-vampires noJohnny Depp: igama, izibuyekezo zezilaleli
Yiziphi amaphilisi utshwala?
Laptop ASUS R540SA-XX036T - ukubuyekezwa kwabanikazi, izici nezici